Iyo yakatangira iyo yemagetsi gomo bhasikoro
musha Blog Electric bike knowledge Iyo yakatangira iyo yemagetsi gomo bhasikoro
Zuva ： 2021-07-28 Zvikamu:Electric bike knowledge Views: 1,471 maonero
Munhu wese anoziva electric mountain bike mazuva ano, asi unoziva here kuti mabhasikoro emakomo akauya sei kare? Makomo emabhasikoro mabhasikoro akagadzirirwa nzira yekuyambuka nyika (makomo, nzira, renje nemigwagwa yematombo, nezvimwewo). Yakaberekerwa muSan Francisco kuWest Coast yeUnited States muna 1977. Panguva iyoyo, rimwe boka revechidiki vaida kukwira mabhasikoro emahombekombe munzvimbo dzakatenuka dzemakomo vakafunga kamwe kamwe kuti: “Kana uchikwanisa kuchovha bhasikoro gomo racho, rinofanira kunakidza kwazvo. ” Muna 1974, Gary Fisher, Charlie Kelly, naTom Ritchey vakafunga Vaida bhasikoro raigona kukwirwa mumigwagwa, kure ne "mapurisa, mota nezvivakwa", saka vakatanga kuisa zvishongedzo uye zvikamu zvemudhudhudhu pane imwe yakasimba ATV nyika isati yasvika. Hondo II.
Mugore rimwe chetero, Gary Fisher neshamwari dzake vakatya rufu rwe "Tamal Pass Mountain Tour", iyo yakagadzira nzira yekuzvarwa kweiyo nyowani nzira yekutasva. Kutevera mhinduro hombe yaGary Fisher munzvimbo yemakomo, Klunker yake yakazosarudzwa seimwe ye "Kumusoro Gumi Mabhasikoro eMagariro" neMagazini ye Mountain Bike Action.
Muna 1976, Charlie Kelly akatanga kusimudzira nhangemutange nyowani yekudzika, yaive yekutanga chiitiko chikuru chebhasikoro. Charlie Kelly akaraira mugadziri Joe Breeze kuti agadzire uye agadzirise emabhasikoro epasi-epasi, ayo aive ekutanga "emabhasikoro emakomo" akambogadzirwa ndokunzi "Breeze".
Joe Breeze akashandisa Breeze sechiratidziro kupedzisa dhizaini uye kugadzirwa kwe9 dzakateedzana mhando pakati pa1977 na1978. Iyo prototype yeBreeze ikozvino iri muunganidzwa weNational Museum yeSmithsonian Institution muUnited States.
Saka vakatanga dhizaini yemuchinjikwa-wenyika, uye yakatumidzwa zviri pamutemo bhasikoro regomo makore maviri gare gare. Kubva ipapo, "makwikwi ekuderera" akabuda sechiitiko chitsva mumakwikwi emitambo. Vatambi vanokwira mabhasikoro emakomo kuti vadzike pamhepo inomhanya nenzira yakatarwa yekudzika. Anokurumidza anokunda, achikwezva vateveri vazhinji. Kunyangwe mabhasikoro akatanga muEurope, iwo emabhasikoro emakomo akagadzirwa nemaAmerican akatsvaira tsika yechinyakare yemabhasikoro, ichivhuvhuta mhepo nyowani pasirese.
Nekudaro, sezvo nguva ichienderera uye zvigadzirwa zvikagadziriswa uye zvichitenderedzwa, mabhasikoro emakomo haachagone kungosangana nezvinodiwa nevanhu, uye electric mountain bike ichagadzirwa gare gare. Inofananidzwa nemabhasikoro emakomo, mabhasikoro emagetsi emakomo akawanda anoenderana nezvinodiwa munharaunda yazvino. Vanokurumidza kutyaira havukavu, refu cruising range, more sensitive braking system, inotsvedzerera uye yakapusa dhizaini dhizaini ... Inotaridzika haina kusiyana nemabhasikoro egomo apfuura, asi zvinokwezva maziso
Kambani yedu yakagadzirawo zvakasiyana siyana electric mountain bike mumakore achangopfuura, uye chega chega basa rinogona kuzadzikisa zvaunoda zvakanyanya sezvazvinogona. Kana iwe uchifarira, unogona tinya pane yedu yepamutemo webhusaiti kubvunza uye kutenga. Ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu kana uine chero mubvunzo.
Prev: Ndezvipi zvakanakira mabhasikoro emagetsi? 5 zvakanaka!
Next: Maitiro ekuchaja bhasikoro remagetsi kuwedzera hupenyu hwebhatiri?
Nhungamiro kumabhasikoro disc mabhureki
Maitiro ekukwira bhasikoro remagetsi: izvo zvinhu zvaunoda kuti zvionekwe
Chii chinonzi T6 mune yealuminium alloy furemu zvinhu zvinorevei?
Unyanzvi hwakakodzera hwekutasva emagetsi emabhasikoro emakomo
Maitiro ekuti mabhureki akachengeteka zvakanyanya panguva yekutasva?
Maitiro ekuchaja bhasikoro remagetsi kuwedzera hupenyu hwebhatiri?
Ndezvipi zvakanakira mabhasikoro emagetsi? 5 zvakanaka!
Ndezvipi zviitiko zvebhasikoro muTokyo Olympic Games?
750w mafuta vhiri yemagetsi bhasikoro 48v isina bhururo yakagadziriswa mota
6 Zvikonzero Zvokuchinjira Kumagetsi Midhudhudhu
Maitiro ekugadzira bhasikoro remagetsi nekukurumidza
Nzira yekutenga yakanakisa kupeta emagetsi bhasikoro
Inokurumidza sei bhasikoro remagetsi kuenda?
Ndingasarudza sei bhasikoro remagetsi?